आदर्श भर्सेस व्यवहार - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
आदर्श भर्सेस व्यवहार | Saturdayकलम | Kavyalaya
Background Image Source: Shutterstock
आदर्श भर्सेस व्यवहार
by नवीन शर्मा July 27, 2019
म पनि बडो आदर्शवादी भइजान्छु कहिलेकाहीँ । मनले बडो देशभक्ति कुरा गर्छ आफै सँग र लाग्छ म जति देशलाई माया कसैले गर्दैन पनि । आँफै-आँफै बडो सानले भन्न मन लाग्छ – केटा अब देशलाई तेरै खाँचो छ । मन प्रफुल्लित भइजान्छ । शिर ठाडो पारेर, छाती फुलाएर हिँड्दिन्छु । तर कसैले देख्दैन मेरो मन भित्र उर्लिएको देशभक्तिको भेल । खैर, देश त जलमग्न पो छ त बाहिर । बाढी छ, भेल छ, डुबान छ । आफ्नो त फेरि मन मात्र पो देशभक्त छ ।
ऊबेला म ब्याचलर फस्ट इयर पढ्थेँ । मेरो गाउँ नजिकको एकजना साथी पनि थियो क्लासमेट अझै भनौँ बेन्चमेट । बसाइ पनि नजिकै थियो । प्राय दैनिक सँगै भइन्थ्यो । लामो समय गफिन्थ्यौँ तर देशको चिन्ता बढी हुन्थ्यो । देश यस्तो भो उस्तो भो । फलानो नेताले हिजो यस्तो बोल्यो । यो चाहिँ गलत बोल्यो । यतिसम्म त ठिकै हो यार । यस्तै यस्तै । त्यतिबेला सम्म कुनै राजनीतिक आस्था थिएन म मा । हामी दुवै जना बडो देशभक्तिका कुरा गर्थ्यौँ । हामीमा बडो आदर्श थियो ।
“जे गर्नु पर्छ देशमै गर्नु पर्छ यार ! हामी कहाँ पनि त सम्भावना छ । खोजी गरिनु आवश्यक छ ।” भन्दै आदर्शको अप्टिमम लेवल पनि क्रस गरिन्थ्यो । त्यसको केही समय पछि नै ऊ मेकानिकल इन्जिनियर पढ्न भन्दै भारत(नयाँ दिल्ली) तिर हानियो । लाग्यो अब म मात्र हुन्छु । त्यतिबेलै मैले महशुस गरेँ हाम्रो आदर्श पहिलो पल्ट त्यहिँनिरै तुहियो ।
सोसल मिडियाको प्रयोग एकदमै धेरै बढिसकेको थियो । प्राय साथीहरु सँग गफ हुन्थ्यो फेसबुक, भाइबरबाट । लाग्थ्यो कम्तिमा हामीसँग देशको चिन्ता त छ । कहिले राम्रो सामाजिक अभियनता हुने र देश बदल्ने सोच आउँथ्यो । कहिले राजनीतिक पार्टी खोल्ने र देशलाई सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने, कुशल राजनेता भइजाने, समाज रुपान्तरणको अग्रगामी हुने जस्ता बिचारहरुले थुप्रै पल्ट आक्रमण नगरेका पनि होइनन् । बहस त कति हुन्थ्यो हुन्थ्यो । थुप्रै सामाजिक अभियानहरुमा पनि सक्रिय भइयो । थुप्रै पल्ट राज्यसत्ता प्रति खरो विरोध पनि गरियो । भुकम्पको बेला अलिअलि सकेको सहयोग पनि गरियो । बाढी पिडितको नाममा सहयोग पनि गरियो । ठिक छ यो त एउटा कुशल नागरिकले देशको अफ्ठ्यारो गर्नु निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि थियो । तर पहिलोपटक पछुतो कतिबेला लाग्यो भन्दा जसले सामाजिक अभियनताको रुपमा राजधानीबाट हामीलाई मोविलाईज गर्यो उसैले त्यो समयको चल्तापुर्जा पार्टीको स्थायी सदस्यता लियो । त्यसदिन देखि बरु देशको सकसको बेला सहयोग गर्नै पर्छ भने पनि स्वन्तन्त्ररुपमा साथी-सगोत्री मिलेर खुल्ला रुपले गर्नु पर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो ।
ठूला-ठूला विकास र सम्वृद्धिको भाषण छाँट्ने राजनीतिक दलहरु अहिले आफै-आफै टुक्रीएर अहिले खण्ड-खण्ड भइसके । समय फेरियो तर अभिव्यक्ति भने अझै उस्तै जवान नै छ । आखिर जति जोगी आएपनि कानै चिरिएका ।
माथि त मैले आदर्शका कुरा गरेँ । अब आउनुस् यही आदर्शलाई व्यवहारसँग जुधाएर हेरौँ । हुन त म आफैपनि एक आदर्शवादी नै हुँ । म जुन समाजमा हुर्किएँ त्यहाँको वातावरण जाँड, रक्सी लगायत कुलतहरुले विकृत थियो । गाँउले परिवेश भएतापनि मान्छेहरु चिया पिउने बेलामा रक्सी पिउँथे । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमी तिर’ भने जस्तो बिहान बिहानै पिएर झल्लु भइबसेका हुन्थे । सोच्दा पनि उद्देग लागेर आउँछ, आउँदैन त ? तर कसलाई के पो भन्नु ! फेरि भनेर पनि कसले पो सुन्दिनु, कसले पो मानिदिनु !
एकदिन गाँउले नाता पर्ने एकजना दाइसँग सोधेँ ।
“दाइ यसरी बिहानै चिया खाने बेलामा लठ्ठिएर के गरिरा तपाईंले ?”
“जिउ थिरमा भएन हो भाइ । थर्थर भएर न पिई सकिएनँ । यसो ठाडो घाँटी लाइदिएँ यार मैले त ।”
“पिउने बानी लागेपछि अनेक बहाना भेटिन्छन् दाइ । घर-परिवार भएको मान्छे सधैँ यसरी कहिलेसम्म चल्ला र ? बेलैमा सोच्नुस् है दाइ, छोराछोरी, भाउजुको के होला !”
कुन्नि के के सोचे या सोच्दै सोचेनन् । नबोली जुरुक्क उठेर सरासर घरतिर लागे ।
मान्छेहरुको व्यहोरा आदर्शभन्दा कतिसम्म टाढा हुन्छ भने एकजना मेरै साथी, आफै सामुदायिक वन समीतिको सदस्य भएर पनि रात झमक्क पर्न नपाउँदै जंगल पस्छ र स-साना पोथ्रा बिरुवा काटेर ल्याउँछ । हेर्नुस् त, आदर्श र व्यवहार बीच कत्रो खाडल !
फेरि अर्कोतिर, घरमा बाबु-आमासँग झगडा गरेर शहर पसेको छोरो दुईचार पैसा कमाउन थालेपछि घरको कुनै वास्ता राख्दैन । घरमा के-कसो छ, मतलब गर्दैन । तर कुशे औंसी र मातातिर्थ औंसीमा बाबु-आमाको फोटो फेसबुकमा राखेर सानकासाथ क्याप्सनमा लेख्छ ‍- “जन्म दिने बुवा-आमा, लभ यु भेरी मच ।” यस्तै औंसीहरुमा बाहेक आफ्नो बाबु-आमाको खोजखबर गर्दैन तर जन्मदिन मनाउन चार पाकेट विस्कुट बोकेर वृद्धाश्रम पुग्छ । आदर्शको बुख्याचा, फोटो, पोस्ट्याउनु पर्यो नि फेसबुकमा ! सच्चा मनकारीले असल काम गर्न जन्मदिन नै पर्खिरहनु पर्ला र ? मान्छेहरु खोक्रो आदर्श र व्यवहार देखाउन किन यतिविधी गर्छन् । बुझ्न सकिएको छैन ।
हामी समाज रुपान्तरणको धाक लगाउँछौँ तर त्यही समाजमा आफ्नो व्यवहारले भने कस्तो असर पुर्याईरहेको छ हामीलाई थाहै हुँदैन । अझ भनौँ, थाहा भइभइ पनि बेवास्ता गर्छौँ । क्याफेको कुनामा चुरोटको धुवाँ उडाउँदै स्वच्छ र हरियाली वातावरणको कुरा गर्छौँ र बाहिर निस्केर दुईचार वटा चाउचाउ, कुर्कुरे बोकेर पार्कलाई तिनका खोलहरु चढाउन पुग्छौँ !
हरित गाँउनगरको कुरा चलाउछौँ, एउटा बिरुवा भने रोप्दैनौँ । ल, रोपेनौँ त ठिक छ तर रोपिएका बिरुवा ननिमोठी हिँड्न त सक्छौँ नि । हो यहीँनेर बारम्बार चुकिरहेका छौँ हामी । अहो, ती हामीले छाँट्ने गरेका आदर्शलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकिदिए ?
हरेक ठाउँमा समानता र समताको वकालत त गर्छौँ तर घर भित्रै विभेदको मुस्लो उठाईरहेका हुन्छौँ । जति नै शिक्षित भएपनि हामी भित्र वास्तविक व्यवहारिकताको कमि छ । हामी व्यवहारिकतामा दरिद्र छौँ । यो स्वीकारेर परिवर्तन गर्नै पर्ने विषय हो ।
त्यसैले, हामीलाई खोक्रो आदर्श चाँहिदैन बरु सही र असल व्यवहारिकता सिक्न जरुरी छ जसले समाज र देश रुपान्तरणमा साच्चिकै योगदान पुर्याउन सकोस् । आफ्नो व्यवहारको कारण अरुले परिवर्तनको महशुस गर्न सकुन् । यी कुराहरु हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । शुरुवात आफैबाट र परिवर्तन घरभित्र बाटै गरिन पर्छ । अब त आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्ने की ?
Ideology vs Behaviour । Image Source: Shutterstock
कलम-कुची संवाद विथ रसिक राज
किन गरे भैरव अर्यालले आत्महत्या ?